Iimpawu ze-IRASA zokuqokelelwa kwamatyala i-Vibe ye-Resort ene-Customist Twist
NUhlobo lwefashoni IRASA [ivakalisiwe 'EYE-RAH- ZAH'isandula ukukhupha ingqokelela yayo yamatyala ebonisa i- 'Resort' vibe enesiko lenkcubeko. Uzaliswe zijijike zesizwe, ingqokelela izaliswe kukusikwa okungumlinganiso, ubuhle bethambo kunye neziqwenga ezithandekayo zesetyhini eziza kukuthatha imini nobusuku ngaphandle kobubi obuninzi.
Ingqokelela ye-IRASA igcwele iziqwenga ezisebenzayo kodwa ezinobugcisa obuyahlulahlula i-chic, isinxibo sokudibanisa esiguquliweyo kunye noyilo olunomdla olunempembelelo enobutyebi base-Afrika. Iithoni kunye nophawu lwento nganye eqokelelweyo imodareyithwa emva konxibelelwano lwenkcubeko kunye nenkcubeko enceda ekwakheni iipateni. Ii-hues ezityebileyo neziqhakazileyo zenza ukuba ingqokelela ibe mnandi kwaye ungaxelela ukuba ukukhutshwa kwale ukuqokelelwa kufike ixesha lokunetha kwemvula.
Jonga ingqokelela ye-Irasa apha ngezantsi ...
ICroisière [Ukuhamba ngenqanawa] Jonga incwadi
Ibhanti: @ i.rasaclothing
Abafazi base-african banxiba ifashoni ingqokelela yakutshanje yaseNigeria Imfashini yaseNigeria yamva nje Imfashini yakutshanje yaseNigeria kunye nezitayile ingqokelela yemfashini yaseNigeria Imfashoni yamabhinqa yamva nje Izitayela zamabhinqa zamva nje Abafazi abasandula ukunxiba ifashoni entsha abafazi abatsha banxiba Imfashini yaseNigeria Umyili wefashoni waseNigeria Isinxibo sabafazi Abafazi banxiba i-brand